ရေသင်္ချိုင်း သို့မဟုတ် ကမ်းသာ သို့မဟုတ် ကသာ - YOYARLAY Digital Media and News
အရေးပိုင်မင်းနေအိမ် (ပြတိုက်ပုံစံလုပ်ထားပေမဲ့ ပန်းချီနဲ့ပိုစတာတွေပဲရှိ)
သင်ဟာ ကိုလိုနီခေတ်နောက်ခံဝတ္ထုတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ယောက်များလား? ဒါမှမဟုတ် George Orwell ရဲ့ Burmese Days ဖတ်ပြီး ကသာရောက်ဖူးချင်နေသူလား? အဲဒါမှမဟုတ်သေးရင် ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီး အရေးပိုင်မင်းရဲ့အိမ်ဆိုတာကို မြင်ဖူးချင်နေပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ ဒီကသာမြို့လေးကို ရောက်အောင်သွား ပြီး ဒီနေရာလေးတွေလည်ပတ်သင့်ပါတယ်နော်…။
၁၈၉၀ ခုနှစ်များဆီက အရေးပိုင်မင်းနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကသာဆေးရုံနားကအိမ်နီကြီးပါ။ ခြံကျယ်ကြီးထဲ ထီးထီးကြီးရှိနေတာပါ။ အဲဒီအိမ်ရှေ့က သားဖွားဆရာမဆီမှာသော့တောင်းပြီး ဝင်လေ့လာလို့ရပါတယ်။
အိမ်ထောင့်မှာ ကံ့ကော်နဲ့မရမ်းပင်ရှိ ။ရှေးလူတွေက လေသာဆောင်နား ပန်းပင်အမြော်မြင်ရှိရှိစိုက်တာ
ပြတိုက်ပုံစံလုပ်ထားပြီး ပန်းချီကားနဲ့ စာရေးဆရာ ဂျော့ချ်အော်ဝဲလ်ရဲ့ မြန်မာပြည့်နေ့ရက်များထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းနေရာတွေပြထားသလို ကိုလိုနီခေတ်အိမ်ဒီဇိုင်းနဲ့ မီးလင်းဖိုတွေ လေ့လာလို့ရပါတယ်။
၂။ စာရေးဆရာ George Orwell နေအိမ်
စာရေးဆရာ George Orwell ရဲ့ အိမ် (ခုတော့ ရဲမှူးကြီးနေပါတယ်။ ခွင့်တောင်းပြီး ဝင်ကြည့်လို့ရ။ ဘာမှမရှိ)
ကသာမြို့ရဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ကြေးရုပ်နားကအိမ်ပါ။ ခြံရှေ့မှာ George Orwell ရဲ့ပုံနဲ့ စာပါတဲ့ ဘုတ်တခုရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မြို့နယ်ရဲမှူးနေထိုင်ပါတယ်။
စာရေးဆရာ George Orwell
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ထဲကရှိနေတဲ့ တင်းနစ်ကလပ် (အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆို မမ်ဘာကို လူဖြူပဲဝင်ခွင့်ပေးတာ)
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ တင်းနစ်ကလပ်ပါ။ George Orwell စာထဲကအတိုင်းဆိုရင်တော့ အဖြူကလွဲရင် အာရှသားတွေကို မမ်ဘာပေးမဝင်တဲ့နေရာပါ။
ကသာနဲ့အင်းတော်ကြားက နတ်ပေါက် ဆင်စခန်း
အချိန်ရမယ်ဆိုလည်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ အချိန်မရလို့မဝင်ခဲ့ရပေမဲ့ မြင်ရတဲ့အနေအထားက တောရိပ်တောင်ရိပ်နဲ့မို့ သာယာမှာအသေအချာပါ။
တစ်ချိန်က ဆိပ်ကမ်းမြို့အဖြစ်စည်ကားခဲ့ဖူးတဲ့ ကသာဆိပ်ကမ်းလေးဟာ ခုတော့သောင်တွေထွန်းနေတာကြောင့် သင်္ဘောကြီးသိပ်မလာ ကလေးတွေရေကူး၊ ရေဆော့တဲ့နေရာလေးအဖြစ်ပဲရှိနေပါတော့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်တွေဆုတ်ရင်း ဂျပန်တွေအသုံးမပြုနိုင်စေဖို့ စစ်သဘောင်္တွေမြှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရေသချိူင်္င်းလို့အမည်တွင်တဲ့ ကသာကို သွားလည်ကြည့်ကြပါလို့။
ကသာမှာပေါတဲ့အစားအသောက်တွေက လိုက်ချီးသီး၊ ပုရစ်ကြော်၊ ငါးကြီးချဉ်၊ ငါးလေးချဉ်ပါ။
သွားမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနားကားစီး နဘားလမ်းခွဲဆင်း (၃) ဘီးနဲ့ ထပ်သွားရမှာပါ။ (ဇလုံတောင်သွားရင်း ဝင်မယ်ဆိုရက် အဆင်ပြေတဲ့လမ်းကြောင်း) မန်းလေး-ကသာကတော့ တိုက်ရိုက်ကားရှိပြီး ကသာ ကားဝင်းထဲထိရောက်ပါတယ်။ (အဆင်အပြေဆုံးလမ်းကြောင်း) ဗန်းမော်-ကသာ ကတော့ ရေလမ်းရှိပြီး ကားလမ်းကတော့ လမ်းအရမ်းဆိုးတဲ့မှောင်ခိုလမ်းမို့ တစ်နေကုန်စီးရပါတယ်။ မိုင် (၁၀၀) ကျော်လေးကို ရထားလမ်းကလည်းအသုံးမပြုတော့တာမို့ အချိူ့နေရာတွေဆိုမြေကြီးထဲမြုပ်နေပါပြီ။
တည်းမယ်ဆိုရင် ကသာမြို့လယ်က စိန်ဟိုတယ်က အဆင်ပြေပါတယ်။ ဈေးနဲ့နီးလို့ ဝယ်ရအဆင်ပြေတဲ့အပြင် (၃) ဘီးဂိတ်နဲ့လည်းနီးလို့ သွားရလာရအဆင်ပြေပါတယ်။ ဈေးကလည်း (၂၅၀၀၀) ပဲမို့ ပေးရတာနဲ့မကတန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပြန်ရတာ အသေအချာပါ။ ညဈေးကလည်း ဟိုတယ်ဘေးတင်ပဲမို့ ညလည်းစားချင်တာပတ်စားရုံ၊ မနက်စာကလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့မထပ်အောင် မျိူးစုံတည်ခင်းပေးတဲ့အပြင် အကြွေဆုံးက မြန်မာမုန့် (၃) မျိူးစီလောက်မထပ်အောင်လုပ်ပေးတာရယ် Receptionမှာ စာအုပ်စင်ထားပေးထားတာရယ် ပါပဲ။အခန်းထဲယူဖတ်ပြီး ပြန်ထားပေးရင်ရပြီ။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကလည်း တအားသဘောကောင်းပဲ။
ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ တအားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ မြန်မာဘာသာပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်။
အားလုံးကျန်းကျန်းမာမာ၊ ဘေးကင်းကင်းနဲ့ ခရီးတွေသွားနိုင်ပါစေ။
Previous Previous post: ဒွိန်းဂျွန်ဆန်ရဲ့ ဗလတောင့်တောင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ကြီးမင်းသားနှစ်ယောက်က ဘယ်လိုတွေ ချီးမွမ်းထားလဲ
Next Next post: ပရိုတင်း လုံလုံလောက်လောက် မစားကြောင်းပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၅) ချက်
ဘိုလီဗီယာက ကမ္ဘာ့အန္တရာယ် အများဆုံး သေမင်းတမန်လမ်း
ကမ္ဘာတစ်လွှားက စွန့်စွန့်စားစားကိုမှ ရှာဖွေချင်သူတွေကိုတော့ အန္တရာယ်များတဲ့ ဒီလမ်းကို မသွားဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဘိုလီဗီယာမှာ သည်းထိတ်ရင်ဖို စွန့်စားရဆုံး နေရာတစ်ခုလို့ လူသိများတဲ့ သေမင်းတမန်လမ်းမှာ စက်ဘီစီးရင်တောင် ဒါက တော်တော်အန္တရာယ်များတဲ့ အားကစားနည်းဖြစ်နေပါပြီ။ နှစ်၂၀ ကြာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးလာချိန်မှာ အန္တရာယ်ကင်းပြီပြောပေမဲ့…
Published: August 3, 20189:28 am Updated: July 8, 20202:01 pm
ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးမယ့် ခရီးသွားဆောင်းပါးလေးကတော့ ယခုနှစ်မင်္ဂလာရာသီအတွင်း မိမိတို့ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးကို ပဲရစ်မှာမှ အသားကုန်ရိုမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ စုံတွဲလေးတွေအတွက်ပါ။ အဲ … ရိုးရိုးချစ်သူရည်စားစုံတွဲလေးတွေလည်း လေ့လာထားလို့ရပါတယ်။ Post Views: 1,944